Greenways in Soomaali - Transportation | seattle.gov
Seattle waxay ku hawlan tahay dhismaha shabakadda neighborhood greenways. Neighborhood greenways waa jidad ammaan, daggan oo laguugu talogalay adiga, qoyskaada iyo deriska. Jidadka baabuurta ku yar tahay iyo xawaaraha, greenway wuxuu:
Horumarin karaa ammaanka
Dadka ku kaalmeyn karaa in ay ka gudbaan jidadka baabuurta iyo dadka ku badan yahiin
Baabuurta kula taliyaa in aysan isticmaalin jidadka xaafadda iyaga iska ilaaliya jidadka waaweyn.
Badbaadin karaa xaaladda dagganaashada ee xaafadahena
Hoos u dhigaa xawaaraha
Dadka geeyaa meelaha ay rabaan in ay tagaan sida beeraha, dugsiyada, dukaamada iyo makhaayadaha
Neighborhood greenways kuma daraan leemanka baskiilada, waana yar yahiin, haddii ay jiraan, saameynta jidadka baabuurta la dhigto. Inta badan waxaa maalgeliya Canshuurta Bringing the Gap ay cod bixiyeyaasha ogoladeen muddada sagaalka sanno. SDOT waxaa soo gaaray codsiyo badan oo iyaga la xariira. Dhab ahaan, dad badan oo xaafadda daggan waxay aad ugu riyaaqeen in ay bilaabeen Seattle Neighborhood Greenway si loo geeyo xaafadooda.
Waddo ammaan ah oo ka raax badan
Jid daggan iyo buslho badan
Jid ammaan ah, ka daggan, in badan la saadaalin karo
Dhinacyada lagu socdo oo ammaan ah iyo taraarax
Neighborhood greenways waxay ku bilowdaan aasaas wanaagsan iyo waxay sameyaan hagaajin yar oo ku biiriya kala duwanaan weyn. Xaafad kasta waa gaar, hase ahatee, waxaa jira dhowr qodob greenwa oo caadi oo aan u isticmaali karno meel kasta.
Baddal xawaaraha la ogol yahay ilaa 20 mph
Ku dar hal hakiyaha laamiga jidka halkii blog
Ku dar segnaalaha iyo calaamadaha lagu sameeyo laamiga si dadka loogu kaalmeeyo in ay helaan meesha ay u socdaan.
Ku dar isugeynta fidinta garabka jidka, nalal dhakhso u hilaaca, meelaha dadka maraan, bartamaha jidka kala gooya, ama segnaalaha baabuurta ee isgoysyada baabuurta ku badan tahay.
Ku dar segnaalaha joogso meelaha laga gooyo greenway
Dhinacyo lagu socdo oo wanaagsan iyo jidad kuna dar taagagga lagu koro garabka jidka.
Tilmaamaha ku saabsan Sida Loo Isticmaalo Neighborhood Greeways
U hoggaansan calaamadaha baabuurta iyo segnaalaha.
Raac calaamaha si ugu sgnaato greenway.
U hoggaansan dhamaan calaamadaha baabuurta iyo segnaalaha.
Ka istaag socdeyaasha iyo baabuurta ee jidka kaa leh.
Si taxadir leh uga gudub isgoysyada.
Raac calaamadaha laamiga ee loogu talogalay baskiilka si aad ugu sugnaato greenway.
Iska fiiri socdeyaasha iyo kuwa wada baskiilada.
U hoggaansan dhamaan calaamadah baabuurta iyo segnaalaha.
Marka aad gadaal uga baxeysid jidka yar ee laga galo guriga, mar kasta iska fiiri gadaal, midig iyo bidix ka hor inta aadan dhaqaajinin baabuurkaada.
Yareey xawaaraha marka aad ka gudbeysid isgoyska ama marka la leexanaayo.
Waa hagaag in baabuurka lagu kor wado calaamadaha laamiga baskiilka.
Ka hor mar qof ku socda baskiil adiga oo ku dhaafa xawaare ammaan ah iyo haddii ay jirto masaafo ammaan ah oo lagu dhaafo, ugu yaraan saddax cag.